दैलेखकी क्यान्सर पीडित, दिलिमाया शोनीको अवस्था निकै दयनीय । – Karnalidrishti
दैलेखकी क्यान्सर पीडित, दिलिमाया शोनीको अवस्था निकै दयनीय ।
कर्णाली दृष्टि संवाददाता ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०९:१६
दैलेख । नारायण नगरपालिका ९ की २८ वर्षीया दिलिमाया सोनी नेपाल क्यान्सर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि काठमाडौ ललितपुरमा उपचाररत छिन् ।
उनको उपचारमा करिब ८४ लाख रुपैयाँ सकियो, ठिक हुने त कता हो कता लाऊँ लाऊँ, खाऊँ खाऊँ भन्ने उमेरमा उल्टै प्यारालाइसिसको सिकार बन्नुपर्‍यो ।, दुवै खुट्टा चल्न छाडे, स्थानीय अस्पतालदेखि नेपालकै प्रतिष्ठित टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जबाट सुरु भएको उनको उपचार भारतको गुजरात र लखनउका ठूला अस्पतालले पनि गर्न सकेनन् ।
दुई वर्षदेखि उपचार गराइरहेकी उनकै खर्चको जोहो गर्न श्रीमान् खाडी मुलुक (दुबईमा) पसिना बगाइरहेका छन् । साढे ४ वर्षकी नाबालक छोरी आमाको बाटो हेरेर बसेकी छन् ।
दिलिमायाको बुवा रेशम बिकले छोरीलाई निको बनाएर घर लैजाने सपना बोकिरहेका छन । उनको उपचारको लागि सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताहरुको लाही अकाउन्ट नम्बरः Bank of Kathmandu Ltd. मा रहेको दिलिमाया शोनिको खाता नं. 214800000161524 मा जम्मा गरिदिनहुन अपिल गरेकी छिन । साथै उनी संग सिधै सम्पर्क गर्नका लागी सम्पर्क: रेशम विकको मोबाईल नं.– 9848050376 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ
७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०९:१६
दैलेख । जिल्लाको भैरवी गाउँपालिकामा अविरल बर्षातले घर भत्किदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार विहाना १०ः३० बजेको समयमा अविरल वर्षाको कारण यस भैरबी गाउँपालिकाको वडा नं. २ रावतकोट बालेसैनि स्थित जय बहादुर थापाको ढुङ्गा माटोले बनेको २ (दुई) तले कच्ची घरको अगाडी पट्टीको बरन्डा भत्किदाँ उनकी ६३ बर्षिया […]
७ भाद्र २०७८, सोमबार ०८:५७
खुला चौरमै बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार